प्रेम धामीको पालाको नीतिगत भ्रष्टाचारको युग अन्त्य गर्छौ : दलजीत धामी « Name of Truth News : News Portal in Nepal
प्रेम धामीको पालाको नीतिगत भ्रष्टाचारको युग अन्त्य गर्छौ : दलजीत धामी
प्रकाशित मिति : २०७९, जेष्ठ, २०, शुक्रबार १६:५८
हिमाली जिल्ला दार्चुलाको विकट मानिने नौगाड गाउँपालिकामा हालै माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सदस्य दलजीत सिंह धामीले एमालेका जिल्ला कमिटी अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीलाई लोप्रिय मतले पराजित गर्दै जिल्लाको राजनीतिमा सनसनी मच्चाए । राजनीतिक रुपमा समान्य परिघटना भए पनि बलियो सांगठानिक संरचना रहेको एमालेका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम धामीलाई पालिका निर्वाचनमा हराउनु भनेको राजीतिक हिसाबले समान्य परिघटना भने होईन । पहिलो कुरा एमालेले जिल्लामा सबै पालिका गुमाए पनि भूराजनीतिक महत्वको पालिका भएकाले जीत्नका लागि सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्यो तर असफल भयो । दोस्रो अध्यक्षका उम्मेदवार प्रेम धामी व्याक्ति मात्रै थिएनन् उनी एक व्यवस्थित र बलियो राजनीतिक संस्थाका नेतृत्व थिए । त्यस अर्थमा पनि दार्चुला जिल्लको नौगाड गाउँपालिकामा माओवादीका नेता दलजीत धामीको विजयलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना भनेर राजनीतिक वृतमा चार्च हुने गर्दछ । आज सुप्रीम खबरले नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष धामी संग सक्षिप्त अन्तरवार्ता गरेको छ ।
तपाई माओवादी केन्द्रकोतर्फबाट पहिलो पटक २०७४ मा उम्मेदवार हुँदा तत्कालीन एमालेका उम्मेदवारसँग पराजय हुनु भयो । तर पछिल्लो पटक उनै उम्मेदवारलाई पराजीत गरी नौगाड गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भयो । २०७४ र अहिलेको निर्वाचनमा फरक परिणाम आउनुमा खास कारण के थिए ?
पहिलो कुरा, जब म पहिलो पटक २०७४ को निर्वाचनमा राजनीतिक मैदानमा प्रतिस्पिर्धामा उत्रिए त्यती बेला मलाई राजनीतिक अनुभवको कमी थियो । मेरो पृष्ठभूमि पूर्ण रुपमा नितान्त शिक्षण पेशा थियो । शिक्षण पेशाको सीमित घेरा हुन्थ्यो । व्यवसायीक दायीत्व वहन गरियो तर सामाजिक विज्ञानको अत्यन्तै जटिल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व्याक्तिगत रुपमा नौलो अभ्यास थियो । स्वभाविक रुपमा जनतासँगको सम्बन्ध र सामाजिक मनोविज्ञानका विषयमा अनविज्ञ थिए । समग्रमा भन्नु पर्दा राजनीतिक ज्ञान र अनुभवको कमी थियो । दोस्रो कुरा पाँच वर्षपछि राजनीतिक रुपमा धेरै अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर पाए । अहिले म निर्वाचित हुनुमा पार्टीमा आएको सांगठानिक सुधार पनि अर्को कारण हो भन्ने ठान्दछु । तेस्रो अहिले देशै भरी गठबन्धन कति सफल भयो वा असफल त्यो समीक्षाको पाटो हो तर नौगाडको हकमा गठबन्धन मैत्रीपूर्ण नै रह्यो । गठबन्धन पनि मेरो विजयको एउटा कारण हो भन्ने लाग्छ ।
स्थानीय चुनाव होस् वा संसदीय चुनाव नै । कुनै पनि पार्टीको जीतमा उम्मेदवारको व्याक्तित्वमा पनि भर पर्छ भनिन्छ नि ?
निश्चय नै नौगाडको हकमा उम्मेदवारको व्याक्तित्वले मत परिणाममा फेरबदल आएको कुरा साँचो हो । गठबन्धन हुदा हुँदै पनि दार्चुलाका पाँच वटा पालिकामा पराजय भएको छ । पुराना जनप्रतिनिधि मध्ये माओवादी केन्द्रका नेता कमरेड जमनसिंह धामी बाहेक अरु सबै नयँ अनुहारका राजनीतिक नेतृत्व विजयी भए । २०७४ सालमा विजयी बनेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरु पराजय हुन पुगे । कांग्रेसका प्रतिनिधि मात्रै होईन, तपाईले देख्नु भयो नौगाडकै हकमा पनि एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले आफ्नो पूर्ववत् राजनीतिक छबी कामय गर्न सकेनन् । जनताको बीचमा अलोकप्रियता बढेसँगै पराजीत हुन पुगे । यसरी गठबन्ध मात्रै सब थोक हो भन्न सकिदैन । निर्वाचन परिणाम अपेक्षाकृत आउनु पनि उम्मेदवारको राजनीतिक छवी पनि महत्वपूर्ण पाटो रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भयो ।
तपाई एउटा जनप्रतिनिधि मात्र होईन, माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । तपाईले एक जनप्रतिनिध र एक राजनीतिक नेतृत्वका रुपमा कसरी अगाडी बढ्नु हुन्छ ?
पहिलो कुरा म रानीतिलाई नितान्त सामाजिक सेवाका रुपमा बुझ्ने गर्दछु अर्थात् राजनीतिलाई व्याक्तिगत जीवनबाट पृथक राख्नु पर्दछ । दोस्रो राजनीतिलाई व्याक्तिगत जीवनबाट टाढा राख्नु पर्छ । त्यसले पारिवारिक व्यवस्थापन र अन्य व्ययभार परिपूर्ती गर्ने बाध्यता हुदैन । अर्थात् द्रव्य प्रतिको मोह पूर्ण रुपमा त्याग्न सक्नु पर्दछ । तसर्थ राजनीतिलाई नितान्त समाजसेवाका रुपमा लिनु पर्छ भन्ने कुरामामा म दृढ छु । राजनीतिलाई व्याक्तिगत र पारिवारिक लाभका रुपमा नलिने हो भने साँचो अर्थमा राजनीति जनताको हितमा हुँछ त्यसले प्रतिनिधिको दायित्व पनि पूरा ह’ने र पार्टीको राजनीतिक जीवन पनि दीगो र विश्वासनीय बन्ने मेरो स्पष्ट बुझाई हो ।
हिजोको एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले गरेको कार्य र तपाईहरुले भनिरहेको कार्यमा जनताले के भिन्नता देख्न पाउँछन् ?
पहिलो कुरा हाम्रो कार्यकालमा हिजोको जस्तो आर्थिक अपार्दशिता हुने छैन । दोस्रो हिजो पालिकामा प्रेम धामी जी नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँका कार्यकालमा पालिकाले गरेका निर्णयहरु गेप्य राखिन्थे । हामी जनताका बीचमा खुलस्त पारेर अघि बढ्ने छौ । तेस्रो प्रेम धामी जीको पालमा नौगाडमा नीतिगत भ्रष्टाचारको सीमा नै हुन्थेन भनिन्छ । त्यो हाम्रो आरोप होईन, एमालेकै कार्यकर्ताहरुले गरेको कानेखुसी हो । हामीले नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गछौँ । नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य भन्नुको अर्थ अरु खुला रुपमा देखिने अनियमितताको मुहान बन्द गर्नु हो । चौथो हामीले हिजो एमालेका प्रतिनिधिहरुको जस्तो निषेधको राजनीति गर्दैनौ । हामी उच्च राजनीतिक सँस्कारसहित सबैको सहभागितामा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु ऋघि बढाउनेछौँ ।
अब तपाईले नौगाड गाउँपालिकामा नेतृत्व गरिसकेपछि अघिल्लो सरकारले गरेका र बाँकी रहेका व्यभारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने गरि सोच्नु भएको छ ?
हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ । हाम्रो पहिलो काम भनेको आर्थिक सुशासन कायम गर्नु हो । त्यसलै हामीले आर्थिक स्वेतपत्र जारी गर्ने भनेका छौ । अर्को कुरा महालेखा परिक्षकको कार्यालयको रिपोर्टलाई पनि जनताको बीचमा ल्याउने छौँ । त्यस्तै गाउँपालिकाको अघिल्लो सरकारले नितान्त आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न क्रमागतमा राखेका अवैज्ञानिक र अदृष्य साँठगाँठ ठानिएका कार्यक्रमहरु रद्द गरिनेछन् । भने पालिकाले आर्थिक भार पूरा गर्न वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान भएपनि अस्वभाविक र अवैज्ञानिक वित्तिय भारको जोखिम हामीले लिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।
आर्थिक स्वेतपत्र राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्ने टुलका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने कुरा सनिन्छ नि ?
हामीले आर्थिक स्वेतपत्र जारी गर्ने भन्नुको अर्थ विगतमा भएका सम्पूर्ण आर्थिक अपार्दर्शितालाई जनताको बीचमा ल्याउने र अबको पालिकाले अघि बढाउने कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउने हाम्रो ध्येय हो । यो आर्थिक अनुशासनको प्राथमिक चरण हो । अर्को कुरा हाम्रो कार्यकालमा प्रेम धामीको पालको जस्तो राजनीतिक प्रतिशोध साधिने छैन । हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि कुनै पार्टी विशेषका नभएर सबै जनताका हौँ भन्ने पुष्टि गर्ने छौ । विकास निर्माण, कर्मचारी नियुक्ति र अन्य कार्यक्रमहरुमा सबैलाई समान सेवा दिईने छ ।